जिरीमा वर्षाको प्रभाव, बिपद ब्यवस्थापनमा मेयर स्वयं सक्रिय - chyordong.com
उमाकुण्ड गाउँपालिकामा असल मित्र नेपाल द्वारा बिद्यालय पोसाक तथा स्टेशनरी बितरण
जनसहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको २५ औ वार्सिक साधारण सभा आजबाट सुरु
देश / राष्ट्रिय • शिक्षा • समाचार
जिरी, २६ असार । रातभर लगातार परेको वर्षाको कारण उच्च पहाडी क्षेत्र निकै प्रभावित बनेको छ । दोलखाको जिरी नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा पनि पहिरो र बाढीले जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
बजार मै पहिरोको डर
जिरी नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित बसपार्कमा करिब ५० मिटर माथिबाट झरेको पहिरोको कारण एक घरमा पुर्ण क्षति भएको छ भने अन्य त्यस क्षेत्र नै उच्च जोखिममा परेको छ । पहिरोले कुनै मानवीय क्षति नभए पनि के कति क्षति भएको भन्ने यकिन विवरण आउन बाकी छ । उक्त घरमा सन्चालनमा रहेको किराना पसल र होटल पुर्णतः नष्ट भएको छ । घटनास्थल वरपर अझै उच्च जोखिम रहेको भन्दै जिरी नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानियको सक्रियतामा उद्दार गरि सो क्षेत्रका अन्य परिवारलाई सुरक्षीत स्थानमा स्थान्तरण गरिएको छ ।
बाटोले बनायो बिचल्लि
नगर भित्र संचालनमा रहेको खाडिचौर जिरी सडकखन्ड सहित अन्य शाखा सडकहरुको विभिन्न स्थानमा पहिरो जादा सडक समेत अवरुद्ध भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक सवारी साधन आवातजावतमा मुस्किल परेको हो । जिरी प्रवेश गर्ने खावा देखि जिरी मुख्य बजार सम्म सडक बिस्तारको काम चलिरहेको र अधिकांश ठाउँमा ढिस्को तथा रुखहरु ढलेकाले सडक अवरुद्ध हुन पुगेको हो । अवरुद्ध भएका स्थानहरुमा जिरी नगरपालिकाको सक्रियतामा नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानियले बिहानै बाट अवरोध हटाउने पहल गरि सडक सुचारु भएको छ ।
ट्राउट फार्ममा पनि पर्यो असर
नगर कै वडा नं. ७ मा संचालित रेन्बो ट्राउट माछ फार्ममा समेत मथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर आएको बाढीले क्षति पुगेको छ । वडाको कुडार स्थित माछा फार्ममा के कति क्षति भएको भन्ने विवरण आउन बाकी छ ।
बिपदमा मेयर स्वयम् सक्रिय
जिरी नगरपालिकाका मेयर टंक जिरेल बिपद ब्यवस्थापन तथा उद्दारमा स्वयं सक्रिय देखिएका छन । गत राती नै बिरामी लिएर काठमाडौ जान लागेको एम्बुलेन्स भारी वर्षाको कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेकोले फर्किनु पर्यो । भारी वर्षाले तत्काल अवरोध हटाउन पनि सहज थिएन । नगर प्रमुख टंक जिरेलले अनेक प्रयासका बाबजुद बिहान मात्र अवरुद्ध सडक सुचारु गर्न स्थानीय ठेकेदार कम्पनिको मेसिन सहित पहिरो पन्छाउन जाने मेसो मिलाए । तर बिहानै त्यो भन्दा नि अप्रिय घटनाको बारेमा खबर सुन्नु पर्यो । नगरको मुख्य बजार लिङ्कनमा अवस्थित बसपार्कमा पहिरोले घर बगाएको भन्ने खबरले पहिला उद्दार तथा ब्यवस्थापन मा लागे । नगरपालिकाको सक्रियता देखाउदै तत्काल मेयर जिरेल घटनास्थलमा पुगे ।
वडा नं. ७ को रेन्बो ट्राउट माछा फार्ममा बाढिले क्षति पुर्याएको खबर पाउनसाथ एक टोलि प्रहरी सहित त्यस स्थानमा खटाए ।
प्रहरी , सेना र स्थानीय संग आपतकालीन उद्दारको बिषयमा छलफल पश्चात पुनः सेना सहितको टोलि लिएर आफै सडक अवरोध हटाउन जिरी खाडिचौर सडक तर्फ खटिए । हाटडाडा खावा खण्डको करिब ६/७ स्थानको ढलेका रुखहरु र पहिरो हटाए साथै सम्भावित ढल्न लागेका रुखहरु ढालेर ब्यवस्थापन गरे । सडक अवरोध हटेसंगै सवारी आवातजावत पुनः संचालन भएको छ ।
मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले आज सहित अझै तीन दिनसम्म निरन्तर वर्षा हुने अनुमान गरि देशभर सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ ।
इन्धनको मूल्य पुनः बढ्यो